Iyo Apple Watch inogona kugona kudzivirira kurwisa kwemoyo | IPhone nhau
Apple Tarisa moyo wekutarisa
El Apple Tarisa moyo wekutarisa uri kure, zvirinani kupfuura isu tese takafunga pakutanga uye, mukufunga, zvinogona kutiunzira kufambira mberi kukuru pakurapa. Kumwe kwekufambira mberi uku kunotaurwa munguva pfupi, asi hazvisi izvo kumberi kwekufambira mberi. Ndezve fungidzira kurwiswa kwemoyo zvisati zvaitika.
Mugadziri Brad Larson akabuda kuti amhanye rimwe zuva uye, pakupera kwechiitiko chake, akaenzanisa mhedzisiro yaakapihwa neApple Watch nemhedzisiro yeimwe Monitor yaakange akapfeka panguva iyoyo. Zvinoenderana nemaonero avo, chokwadi chekuti Apple Watch haina mvumo neiyo FDA (Kudya neDrug Administration) sechigadzirwa chekurapa hazviite kuti ive kure nechinhu chisina kujeka, kuve unenge uri padanho rakaenzana neye electrocardiogram.
Larson uchienzanisa mhedzisiro yeApple Watch neMio Alpha yemoyo yekutarisa, iyo inokosheswa kwazvo nekuda kwayo chaiyo EKG. Iyo Mio Alpha inotora masampuli kamwe pamasekondi matatu uye iyo Cupertino smartwatch inozviita kamwe chete pamasekonzi mashanu, asi kuverenga kwacho kwakafanana. Mufananidzo wakakosha chiuru chemazwi.
Neichi chaiyo, iyo Apple Watch inogona kubatsira zvakanyanya pakudzidza chirwere chemwoyo. Parizvino, varwere vanofanirwa kuenda kunoshanyira chiremba kana chipatara kuti vamhanye pachitsiko uye vagamuchire kuverenga kwe EKG. Sanganisa mhedzisiro yehupenyu hwezuva nezuva nemhedzisiro yezviitiko zvinoda zvakanyanya inogona kubatsira vaongorori kuti vanzwisise zvakawanda nezve kuita kwemoyo.
Apple yaizoda FDA bvumidzwa kuratidza EKG dhata kana kupa kurapa kurudziro, asi nyanzvi yezvokurapa nyanzvi Euan Thomson anodaro wachi inojekeswa neDFA kuti itarise iyi data uye software yacho inogona kushandiswa kuyambira vashandisi nezvekurwara kwemwoyo kuri kuuya kana kufamba nekukurumidza mukuferefeta.
Kambani yaThomson ndiyo yakatanga kugamuchira mvumo yeDAA pane mbozhanhare ine EKG yekutarisa. Iyo zvakare ine FDA yakatenderwa algorithm iyo inogona kuona atrial fibrillation (isina kujairika, inokurumidza mutinhimira, kana mutinhimira unogona kukonzeresa kutenderera kweropa kuyerera) mune yayo iOS app.
Kugamuchira FDA tendero richava dombo mumugwagwa wakaomesesa kufamba, asi Apple yatove kuratidza kufarira kubatsira kwekurapa kwekurapa ne HealthKit ne ResearchKit. Zvakare pane oximeter yakaremara mukati meApple Watch uye ivo vakahaya timu yenyanzvi dzekurapa. Zvinotaridza kuti ivo vane chimwe chinhu chakakosha mupfungwa pane kungova nyore kurovedza muviri bracelet.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Iyo Apple Watch yakanyatsojeka zvekuti inogona kukwanisa kudzivirira kurwisa kwemoyo
Mario Llavona anochengeta mufananidzo akadaro
Zvishoma kana iwe uine yakajeka ruoko rwe tattoo ...
Pindura kuna Mario Llavona
Iyo yekurovera moyo sensor yakanyatsojeka sezvakaratidzwa mune bvunzo dzakasiyana. Ivo vanototi pane chakavanzika O2 saturation sensor iyo inogona rimwe zuva kuona mwenje. Asi kubva ipapo kusvika pakufungidzira kurwiswa kwemoyo ...
Nhasi hazvigoneke kufanotaura chirwere chemwoyo nematekinoroji epamberi ekurapa. Zvishoma zvishoma neApple Watch. Kuongorora kuwanda kwemoyo wako kwakasiyana kwazvo neEKG (electrocardiogram) kurekodha. EKG haisi kungotizivisa nezve iyo frequency, asi zvakare inotitaurira nezve chiitiko chemagetsi chemwoyo, chinova ndicho chinoshandiswa kuongorora chirwere chemwoyo. Iyo Apple Watch haiite chero chinhu nezve chiitiko chemagetsi chemoyo. Asi zvakare, kunyangwe iyi EKG haina kukwana pazviitiko zvakawanda, tinoda kuongororwa kweropa kuti tikwanise kuita ongororo izere.
Ini handizive kuti ndeapi matekinoroji aya achave nevaongorori, asi zvinoita sekunge kwandiri kuti izvo zvavakaita zviri kurotomoka.
Chimwe chinhu ndechekushandisa kwekurapa kwemamwe maratidziro, akadai seatrial fibrillation kana AV block, ayo anokanganisa zvakanyanya pamwoyo. Pano kana iri mhando yechigadzirwa ine zvakawanda zvekutaura uye ichabatsira varwere vazhinji.
Yakataura nyanzvi yezvokurapa.
Pa Castelli akadaro
Pindura Pa Castelli
Facundo Casal Després akadaro
Pindura kuna Facundo Casal Després
Alfredo Rangel Ortiz akadaro
Unosvika rini kuMexico
Pindura kuna Alfredo Rangel Ortiz
Damn mudziyo wevatengi, zvinoita sekunge hapana chimwe chinhu pasirese.
Ndeipi garandi yechokwadi yeApple Watch?